Lapho izinsuku evumayo ziyeza zokwelatjhwa kwamazinyo?
Zikhona izinsuku evumayo zokwelatjhwa kwamazinyo? Kuthiwani uma kunesidingo esinjalo: kukhona ubuhlungu noma uphawu? Linda kulezi zinsuku, noma ukusheshe ehhovisi wamazinyo? Emva ukufinyelela kwesikhathi ukuba udokotela, kungabangela izinkinga eziningi futhi ngezindleko. Ngaphandle kuka ukungayinaki inkinga, aba maningi kwakudinga isikhathi kanye nezindleko.
Uma ukholwa ukuthi ikhalenda zesayensi yokufundwa kwezinkanyezi, esekelwe izibikezelo kanye nezincomo, sekuyizinsuku lalibe nesiqalo esihle kakhulu zokwelatjhwa kwamazinyo iqala ngokushesha ngemva kokuba inyanga egcwele. Kuthi ababhula ngezinkanyezi uthi?
Lapho inyanga isiphela kangcono futhi ngaphandle kobuhlungu ukususa amazinyo. ezinhle Ikakhulukazi ukukwenza ekuseni ezinsukwini ngisho-olunezinombolo. Sesinamandla edilingene futhi kungaphezu amazinyo ngokuvamile kangcono bona bangakwenzi. Kodwa abantu ubuhlungu acute cishe ukukhumbula ikhalenda kwenyanga.
Ngakho-ke, iseluleko esingcono kuyinto - vakashela udokotela wamazinyo okungenani kanye ngonyaka. A namazinyo uswidi udinga isikhathi.
Ukukhulelwa kuba torque engu okungekuhle ukwelapha amazinyo nje kuphela kodwa futhi wonke umzimba. Phela, ngalesi sikhathi ngeke sikwazi ukwenza X-ray ukuthatha amaphilisi ezinhlungu. Ngokuvamile, noma yimuphi umuntu okufanele uvikelwe, futhi uvakashele udokotela wamazinyo wakho luhlolo kanye izimbangela zezifo zamazinyo. Kuyadingeka ukuba aphathe caries, ukususa itshe futhi ususe sokwenziwa.
Phakathi nenkathi yokukhulelwa, abesifazane ku isizinda ukushintsha kwama-hormone kungaba ekuhluphekeni ngamazinyo abo, ngisho noma eduze elandelayo isimo ngaphambili. Kubalulekile ukuba uqale inqubo, hhayi ukuze uyilethe ukungenela zempilo ezingathí sina. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthatha ayinkimbinkimbi adingekayo amavithamini avikela umzimba emathonyeni amabi.
Futhi uma kwakukhona amazinyo, futhi wathatha uhambo oluya wamazinyo liyadingeka, khona-ke nje udinga ukwenza imithetho embalwa. Ngokwesibonelo, abesifazane abakhulelwe Kunconywa ukuvakashela udokotela lapho beqala ukopha kwezinsini, namazinyo bakulalele. Lezi izimpawu ukuvuvukala incipient, okuyinto engcono kugwenywe.
izinsuku Evumayo zokwelatjhwa kwamazinyo kwabesifazane abakhulelwe kwenzeka ngolunye usuku, e senyanga zokugcina. Ngalesi sikhathi futhi bavunyelwe ukususwa. Kodwa ukusetshenziswa imithi, ikakhulukazi amaphilisi ezinhlungu, kufanele kuvunyelwane ngakho udokotela futhi ibhekane ngokuqinile ngaphansi kweso lakhe.
Ngesikhathi besanda kuqala, njengoba okuhlukile, kuvunyelwe ekwelapheni izinhlungu acute kwenzeka uma pulpitis futhi periodontitis. Kungenjalo ukutheleleka sizothinta wonke umzimba. Bonke abanye amacala kungcono ukushiya izinsuku ezinhle zokwelatjhwa kwamazinyo.
Ukwelashwa izifo ezibangelwa amagciwane
izifo ezibangelwa amagciwane njalo zikufice umuntu ngesikhathi esingafanele. Umbuzo, kungakhathaliseki ukuya wamazinyo ngesikhathi abandayo? Uma kuhambisana nesimo umzimba namahlaba ubuthakathaka, akuyona neze into umuntu lapho benza noma yini. Futhi ukuza ukucabanga umzimba iyonke, kudingeka limhawukele. Amasosha omzimba sesibuthakathaka esikhathini lesi sifo. Noma yimuphi ukucindezeleka ungakulimaza sengozini ngalesi sikhathi umzimba.
Uma asikho isidingo ngokucindezela, kungcono ukulinda izinsuku propitious zokwelatjhwa kwamazinyo. Ngaphezu kwalokho, uma kubanda kuhambisana amakhala yisisu, ke esihlalweni likadokotela wamazinyo cishe ukuze aphumelele. Ngaphezu kwalokho, lesi sifo kalula ukungena evulekile ekwelapheni izinyo, kukhona amathuba ukwakheka izilonda.
Kunezikhathi lapho akunakwenzeka ukubekezelela ke akukho la ukuya noma udokotela noma isiguli. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi ukususwa izinyo ne-SARS - kuyinto engathandeki kakhulu!
It kuvela ukuthi umuntu ngokwakhe kufanele unqume kulokho izinsuku esihle ekwelapheni amazinyo, futhi wenze i-aphoyintimenti. Yiqiniso, uma sikhuluma uhambo kuhlelwe ukuba kudokotela. Kodwa yalezo ziguli bakholelwa ekufundeni izinkanyezi, kudingeka uzame ukuya wamazinyo ngemva kwenyanga egcwele.
Kungenzeka yini ukuba aphathe namazinyo okhulelwe izinzwa?
Ukuhambisana amazinyo ngaphandle besokunxele
Non-carious izilonda amazinyo: izinhlobo, izimbangela, ukwelashwa
Izimpawu, izimbangela kanye nokwelashwa stomatitis e ingane
Udweba kanjani inkomishi yetiye? Amacebo eziwusizo
Ikhanda lamadoda "cap" ngezinwele ezimfushane neziphakathi
Imephu ye-Tinkoff. Ukubuyekeza kanye nencazelo emfushane
Ihhotela uMelpo Antia 4 * (Cyprus / Ayia Napa): izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Actress Polish Krystyna Janda: ukuphila isiphepho esasikulo futhi marina ethule
Canazei, Italy - Winter sika Tale
Njengoba izinyoni kusuka ibhodlela plastic athokozise?
Isifo Hydatid: kuyini. Ukuxilongwa kanye nokwelashwa of echinococcosis